Onyinye mmeghe: Blackview BV8800 maka naanị euro 225 | Ozi gadget
Ụlọ Ignatius | 10/01/2022 14:00 | Mobiles
Blackview gosipụtara nzọ ọhụrụ ya maka 2021 na njedebe nke 2022. Anyị na-ekwu maka Blackview BV8800, ọnụ nke na-erute ahịa na ụfọdụ. karịa arụmọrụ mara mma na uru maka ego. Iji mee mmemme mmalite ya, anyị nwere ike nweta ngwaọrụ a naanị 225 euro site na AliExpress.
Ọ bụrụ na ị na-achọ mobile nwere a ike processor, ezuru ebe nchekwa na nchekwa Na nke ahụ na-enyekwa anyị igwefoto na-adọrọ mmasị na batrị dị egwu, ị kwesịrị ilele ihe niile ngwaọrụ a na-enye anyị na nke anyị zuru ezu n'okpuru.
Blackview BV8800 ewepụtara nso nso a gụnyere ọnụ ọgụgụ buru ibu nkwalite tụnyere ụdịdị ndị nrụpụta a gara aga na o nwere ihe niile na-aga ka ọ bụrụ ekwentị ị na-achọ, n'agbanyeghị otú i si eji ya.
Ọ bụrụ na ị na-ekpori ndụ n'èzí, ị kwesịrị ịma na Blackview BV8800 gụnyere Asambodo MIL-STD-810H, set nke igwefoto 4, gụnyere igwefoto ọhụụ abalị na batrị karịa 8.000 mAh nke ị na-agaghị echegbu onwe gị maka ịchaji ya mgbe niile.
1 Nkọwa Blackview 8800
2 Igwefoto maka mkpa ọ bụla
3 Ike maka kacha ụtọ
4 Batrị ruo ọtụtụ ụbọchị
5 Ujo na dobe na-eguzogide ọgwụ
6 Ngosipụta 90 Hz
7 Dakọtara na Google Play
8 Atụmatụ nchekwa
9 Nwee onyinye ahụ
Nkọwa Blackview 8800
Usoro njikwa Doke OS 3.0 dabere na gam akporo 11
Ihuenyo 6.58 inch - IPS - ume ọhụrụ 90 Hz - oke ihuenyo 85%.
Mkpebi ihuenyo 2408 × 1080 HD zuru oke +
Batrị 8380 mAh - Na-akwado ịchaji ngwa ngwa 33W
Igwefoto azụ 50 MP + 20 MP + 8 MP + 2 MP
Igwefoto n'ihu 16 MP
Njikwa Bluetooth 5.2
Nsorouzọ GPS - GLONASS - Beidou - Galileo
Netwọk GSM 850/900/1800/1900
WCDMA B1 / 2/4/5/6/8/9 nwere RXD
CDMA BC0 / BC1 / BC10 nwere RXD
Asambodo IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
Agba Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndị agha mmiri / Mecha Orange / mmeri ojii
Akụkụ 176.2 × 83.5 × 17.7mm
Ibu ibu 365 grams
ndị ọzọ Dual Nano SIM - NFC - ihe mmetụta mkpịsị aka mkpịsị aka - Nchọpụta ihu - SOS - OTG - Google Play
Igwefoto maka mkpa ọ bụla
N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-emepụta ihe dị elu, bụ ndị rapaara na 12 MP, Blackview na-enye anyị ihe mmetụta isi 50MP, Mkpebi nke ga-eme ka anyị gbasaa ihe niile anyị na-ejide ma nwee obi ụtọ na ihe niile egosipụtara na ya.
Ọzọkwa, mgbe a na-ebipụta akwụkwọ. anyị enweghị otu oke mmachi na anyị na-ahụ naanị 12 MP. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ihe mmetụta 20 MP, ihe mmetụta ọhụụ abalị nke ga-enye anyị ohere ịse foto na vidiyo n'ọnọdụ ọkụ ọ bụla.
Tinyere ihe mmetụta abụọ ahụ, anyị na-ahụkwa a ultra wide angle sensọ, ihe mmetụta nke na-enye anyị nlele ogo ogo 117 na ihe mmetụta 8 MP nke na-ahụ maka ime ka ndabere nke ihe oyiyi anyị na-eji ọnọdụ eserese.
Igwefoto niile na-eji Nzuzu nke artificial n'oge nhazi, iji mee ka ọ dịkwuo mma, ọ bụghị naanị àgwà nke ejidere, kamakwa iji kpochapụ obere ezughị okè.
N'ihu, Anyị na-achọta igwefoto 16 MP, igwefoto nke na-agụnye ihe nzacha mara mma iji melite selfies anyị, na-ebelata ahịrị okwu, ezughị okè na ndị ọzọ, na-esote, a na-amanye anyị mgbe niile ikpochapụ.
Ike maka kacha ụtọ
Ma ị ga-anụ ụtọ egwuregwu ndị na-achọsi ike ma ọ bụ ka ị na-edekọ vidiyo na-aga n'ihu ma ọ bụ na-ese foto, jiri processor MediaTek Helio G96 anyị agaghị enwe nsogbu arụmọrụ ọ bụla.
Tinyere nhazi a, nke karịrị isi 300.000 na akara AnTuTu, anyị na-ahụ. 8 GB nke ụdị ebe nchekwa RAM LPDDR4x na 128 GB nke ụdị nchekwa UFS 2.1.
Ma ebe nchekwa LPDDR4X na nchekwa UFS 2.1 na-enye anyị ọsọ nke data na njikwa ngwa nke ahụ ga-ezere igbu oge dị egwu, lags na ndị ọzọ na anyị nọ n'ọnụ ọnụ ọnụ ala karịa.
Batrị ruo ọtụtụ ụbọchị
La batrị na igwefoto dị nsọ. Ndị ọrụ niile chọrọ iji nke ọhụrụ megharịa ọdụ ụgbọ ochie ha kwesịrị iburu akụkụ abụọ a n'uche mgbe niile. Anyị ekwuola maka akụkụ igwefoto dị n'elu.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka batrị, anyị ga-ekwu maka ya 8.340 mAh nke Blackview BV8800 nyere. Site na nnukwu batrị a, nke nwere ike ịdịru ihe ruru ụbọchị 30 na njikere, anyị nwere ike ime njem gaa n'ikuku na udo zuru oke n'atụghị egwu ịnọrọ.
Blackview BV8800 bụ 33W ngwa ngwa dakọtara, nke na-enye anyị ohere ịnara ya naanị awa 1,5. Ọ bụrụ na anyị ejiri chaja ike dị ala, oge nchaji ga-adị ogologo.
Ọzọkwa gụnye nkwado maka azụ chaja, nke na-enye anyị ohere iji batrị nke ngwaọrụ a chaja ngwaọrụ ndị ọzọ site na eriri USB-C.
Ujo na dobe na-eguzogide ọgwụ
Dị ka ọtụtụ ngwaọrụ sitere na ndị nrụpụta a, BV8800 na-enye anyị asambodo ndi aghaAsambodo agha emelitere n'ụkpụrụ ọhụrụ, na-eme ka ọ dị mma maka ndị ọrụ na-amasị ime njem n'èzí.
Ọzọkwa, ekele igwefoto ọhụụ abalị, anyị nwere ike ịlele ngwa ngwa na-enweghị iji ọkụ ọkụ, ma ọ bụrụ na gburugburu anyị nwere anụmanụ ma ọ bụ, chọta onye so n'ìgwè ahụ anyị furu efu.
Ngosipụta 90 Hz
Ihuenyo nke Blackview BV8800, ruru 6,58 inch, yana mkpebi FullHD + na nha ihuenyo nke 85%. Mana, a na-ahụ ihe kacha amasị ya na ọnụego ume ọhụrụ ya. ọnụego ume ọhụrụ ruru 90 Hz.
Daalụ maka ọnụego ume ọhụrụ a dị elu, ọdịnaya niile, ma egwuregwu na ngwa nchọgharị yana ibe weebụ. ọ ga-adị ka mmiri mmiri karịa karịa ihe ngosi 60Hz ọdịnala, ebe a ga-egosipụta okpokolo agba 90 kwa sekọnd ọ bụla kama 60.
Dakọtara na Google Play
N'ime Blackview BV8800, anyị na-ahụ oyi akwa nhazi Doke OS 3.0, dabere na gam akporo 11 na ọ dakọtara na Ụlọ Ahịa Play, nke ga-enye anyị ohere ịwụnye ngwa ọ bụla dị na ụlọ ahịa Google gọọmentị.
Doke OS 3.0 bụ a nnukwu nyocha atụnyere Doke OS 2.0. Ọ na-agụnye mmegharị mmegharị ahụ nke nwere nghọta karịa, imewe dị mfe iji, mbugharị ngwa smart, akwụkwọ ndetu emelitere nke na-akwado idekọ aka ọdịde na ndekọ olu...
Dị ka ọnụ ala dị mma kwesịrị nnu, Blackview BV8800, gụnyere ha abụọ ihe mmetụta mkpisi aka gụnyere na mmalite bọtịnụ na usoro nke ihu ihu. Na mgbakwunye, ọ na-agụnye bọtịnụ nke anyị nwere ike ịhazi ọrụ ya nke ọrụ 7 dị iche iche.
Mgbawa NFC enweghị ike ịnwụ na ngwaọrụ a. Ekele maka mgbawa a, anyị nwere ike iji kaadị kredit anyị kwụọ ụgwọ n'ahịa ọ bụla na-ebughị obere akpa na ụgbọ njem ọha.
La nkwalite nkwalite nke ahụ na-enye anyị ohere ịnweta Blackview BV8800 maka naanị 225 euro VAT na mbupu gụnyere, bụ naanị 500 nkeji mbụ. Ọ bụrụ na-amasị gị ihe niile ọdụ Blackview ọhụrụ a na-enye gị, echela ugboro abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Mwepụta onyinye: Blackview BV8800 maka naanị euro 225